China JY-916 Silicone Rubber maka ụlọ ọrụ na-emepụta ngwa eletriki eletriki | Juyou
JY-916 Silicone Rubber maka Ngwa Ngwa Eletriki
Magburu onwe Fluidity / High Ike na elu Tearing Ike / Good eletriki mkpuchi / Fast vulcanization ọsọ na kpo oku / Ọgwụ na ịkpụzi ụzọ
Maka njikọta njikọta eriri USB njikọ
Ngwa eriri eletriki
Isi ọrụ nka
Ba gwọrọ ya
Vdị egwu Inspepe
Shelf Ndụ， 25℃
Aa gwọrọ ya
300% Smgbatị mgbatị
Ike n'ikpere mmiri
Igwe ọkụ Lozi
Dielectric mgbe niile
Volum Rịdị adị
Ọkụ eletrik na -eguzogide
Ịgwọ ọsọ data 100 × min 10min vulkameter data: TC10 8′16 ， C TC90 10′39 ″
Data ulka min 10min vulkameter: TC10 3′20 ， C TC90 4′19 ″
Data ulka min 10min vulkameter: TC10 2′39 ， C TC90 3′30 ″
Agba nke ngwaahịa
Enwere ike ime dịka ọchịchọ onye ahịa si dị
Ojiji na usoro onunu ogwu
Ịtụ: Tuo akụrụngwa A na B dị ka ngwakọta agwakọta, ptinye A na B ka ọ bụrụ ihe nchekwa nchekwa iche iche nke ngwa ntụtụ,
Ngwakọta: Ngwakọtana A na B dị ka ngwakọta agwakọta na igwekota Motionless.
Gbanye ngwakọta (A na B) na akpụ akpụ. Oge ọrụ maka ngwakọta (A na B) n'okpuru okpomọkụ ụlọ (25 ℃) dị ma ọ bụ7 ụbọchị. Ma ọ bụ belata oge ọrụ site na kpo oku.
Ọ bụrụ na ịkwụsị akụrụngwa ịkpụ ntụtụ ruo ogologo oge, kwesịrị ịsachasị roba na-agwakọta nke ọma na (Motionless mixer) ma ọ bụ wepu ma tinye igwekota Montionless na gburugburu ọnọdụ okpomọkụ dị ala (- 10 ℃).
Njupụta: Enwere ike ịgwọ ngwaahịa a ngwa ngwa site na kpo oku. Oge ọgwụgwọ bụ naanị nkeji iri na 120 ℃. Ọ bụrụ na akpụ akpụ ahụ buru ibu, oge ọgwụgwọ ya ga-adị ogologo karịa.
Ọ dị mkpa ị attentiona ntị
N'oge nchekwa na iji usoro, a ga -ezere ihe nrachi ahụ na igwe dị arọ dịka nitrogen, phosphorus, sọlfọ na ngwakọta ya, ma ọ bụghị ya, ọ ga -emetụta arụmọrụ ọgwụgwọ nke nrapado.
Nchekwa A na B iche, na -eji ha obere oge mgbe agwakọtara.
Ejiri pail nchara kpuchie ya na 200L, A na B na -akwakọba iche. Enwere ike ime ụzọ ngwugwu dị ka onye ahịa si chọọ.
Nkwakọ ngwaahịa na nchekwa
Ekwesịrị ịchekwa ngwaahịa a na ebe dị jụụ ma na -ehicha n'okpuru okpomọkụ ụlọ, ndụ shelf bụ ọnwa 12 site na ụbọchị emepụtara, biko leba anya na ụbọchị emepụtara na nkwakọ ngwaahịa ngwaahịa a na -echekwa ma bufee ya dị ka nke na -abụghị. -ngwongwo ndị dị ize ndụ
Ngwaahịa a anaghị egbu egbu mgbe ọ gwọchara ya nke ọma, mana ị kwesịrị izere ịkpọtụrụ ya na anya tupu ị gwọọ ọrịa, ma ọ bụghị were mmiri zuru oke hichaa anya gị ma ọ bụ gaa ụlọ ọgwụ; Ekwesịrị izere ịkpọtụrụ ụmụaka na ngwaahịa mmiri mmiri a na -edozighị.
Data a sitere na ihe ọmụma na ahụmịhe nke ụlọ ọrụ anyị. Dika ọdịiche nke gburugburu na ọnọdụ siri dị, a na -atụ aro na onye ahịa kwesịrị ịmụta maka nkọwa ngwaahịa a wee nwalee ya iji hụ na arụmọrụ na nchekwa nke ngwaahịa tupu i jiri ya. N'ebe a, anyị na -ekwupụta na ihe ngosi nka ma ọ bụ aro anyị na -enye bụ naanị maka ntụnye, anyị anaghị eburu ibu ọrụ iwu ọ bụla maka nke a.
Nke gara aga: JY-920 ụfụfụ silicone roba
Osote: JY-905 akpụkpọ anụ ịme anwansị silicone roba
JY-920 ụfụfụ silicone roba
JY-131M rọba silicone mmiri mmiri maka ịkpụzi
JY-988 rọba silicone mmiri maka akwa
JY-905 akpụkpọ anụ ịme anwansị silicone roba